PressReader - Ilanga langeSonto: 2018-10-28 - UNGAPHANSI KWENGCINDEZI ENKULU U-ROGER DE SA
UNGAPHANSI KWENGCINDEZI ENKULU U-ROGER DE SA
Ilanga langeSonto - 2018-10-28 - Ezemidlalo - MFANAFUTHI NDLOVU
UNGAPHANSI kwenkulu ingcindezi uroger de Sa ( osesithombeni) ongumqeqeshi wecape Umoya United ezovovana inkani neroyal Eagles kowenational First Division (NFD) namuhla ngeSonto ngo-15h30 eboland Stadium, ecape Town.
UDE Sa obuye abe ngumnikazi we-united ubhekene nengwadla njengoba ezakhe zidonsa kanzima kulesi sigaba yize zibuya kwi-absa Premiership.
Izodlala ne-eagles esakhala ngokulahla amaphuzu amabili kungenasidingo ibambana nets Galaxy ngo-0-0 ngeledlule echatsworth Stadium.
Usazi Ngubane ocija e-eagles, uthe unomthwalo onzima wokwenza kahle njengoba esaqhoqhobele isikhundla sokupheka le kilabhu kwazise ukagisho “KG” Dikgacoi usamisiwe aze avele ngaphambi kwekomidi eliqondisa izigwegwe ngelizayo.
Ungubane uthe bazimisele ngokubuya namaphuzu agcwele ekuhambeni. Uthe okuhle wukuthi bazokuya kulo mdlalo nesikwati esiphelele. Uthi unovalo ngesimo sezulu sasecape Town esiguquguquka njalo.
“Ngilwa nokuqinisekisa ukuthi kasingenelwa ngamagoli. Okungijabulisayo wukuthi sesiyawashaya amagoli.
"Sizimisele ngokubuya namaphuzu agcwele kulo mdlalo,” kusho ungubane.
Uloyiso Nabe ongumxhumanisi we-united, uthe bazokuya kulo mdlalo ngaphandle kwabadlali ababili udino Visser othinteke iqakala nomanti Mekoa osaqedela isigwebo sekhadi elibomvu. Nokho uthi bawulungele lo mdlalo.
Isiyonke imidlalo YENFD enamuhla ngesonto ihlelwe kanje:
Eboland: Cape Umoya United vs Royal Eagles 15h30.
Ekameelrivier: TS Galaxy vs Maccabi FC 15h30.
Etuks: Pretoria University FC vs Ubuntu Cape Town 15h30.